ကွမ်းယာစားသူများ သတိထားစရာ အန္တရာယ် – WunYan
ကွမ်းယာစားသူများ သတိထားစရာ အန္တရာယ်
ကွမ်းစားတဲ့ အလေ့အကျင့်ဟာ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာတင်မဟုတ်ပါဘူး။ အရှေ့တောင်အာရှဒေသတော်တော်များများမှာတွေ့ရပါတယ်။ အများဆုံးကတော့ ထိုင်ဝမ်၊ ပြီးရင်ကျွန်မတို့ နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကွမ်းစားခြင်းက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းစေရုံတင်မကပါဘူး။ စားသုံးတဲ့သူကိုပါ အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကွမ်းယာမှာ အဓိကအားဖြင့် ကွမ်းရွက်၊ ကွမ်းသီး၊ ထုံးနဲ့ စားသုံးတဲ့သူပေါ်လိုက်ပြီး အခြားပစ္စည်းများပါဝင်ပါတယ်။
အဓိကကတော့ ကွမ်းသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ အာရီကိုလိုင်း (arecoline)ပါ။ သူက ကင်ဆာဖြစ်စေပါတယ်။ ကင်ဆာမဖြစ်ခင်မှာ ပါးစပ်ထဲမှာ အဖြူကွက်တွေ အနီကွက်လိုအနာတွေဖြစ်တာ။ ပါးစောင်မှာ အနာဖြစ်တာ ရောင်တာ ပေါက်ပြဲတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ကင်ဆာမဖြစ်ခင် ရှေ့ပြေးလက္ခဏာတွေပါ။ အဲ့နောက်မှာ ပါးစောင်ကင်ဆာ၊ အသည်းကင်ဆာလည်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေမှာဆိုရင် လမစေ့ဘဲ ကလေးမီးဖွားတာထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကွမ်းယာမှာ ပါတဲ့ထုံးကြောင့် ကင်ဆာပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပါးစပ်ထဲမှာ ဝါးနေချိန်မှာလည်း ထုံးဓါတ်ကို အဆမတန်မြင့်တက်စေပြီး ခံတွင်းထဲမှာ ရှိတဲ့ တစ်ရှူးတွေကိုပျက်စီးစေပါတယ်။ ကွမ်းဝါးနေချိန်အတွင်းမှာ ခံတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ တံတွေးဟာ ပြင်းအား pH 10 အထိမြင့်တက်လာပါတယ်။ များသောအားဖြင့် အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာရည်တွေတောင်မှ pH9ဝန်းကျင်ပဲရှိပါတယ်။ ကွမ်းတံတွေးဟာ အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာရည်ထက်တောင်မှ ပြင်းအားပိုများပါတယ်။
ကွမ်းယာကို များများစားလေ။ အချိန်ကြာကြာ ဝါးလေ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးပိုများလေဖြစ်ပါတယ်။
ရှေးခေတ်တုန်းကတော့ ကွမ်းယာစားရင် အစာကြေတယ်။ ခံတွင်းနံ့ကင်းတယ်ဆိုပြီး ထမင်းစားပြီးရင် စားကြပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကွမ်းသီးမှာပါဝင်တဲ့ ဓါတ်တွေက အစာလမ်းကြောင်းမှာ ရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေကို လှုံဆော်ပေးတယ်။ တံတွေးပိုထွက်စေတယ်။ ဝမ်းမှန်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အစာအိမ်အနာပိုဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် ကွမ်းယာစားခြင်းမှာ ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးက ပိုများနေတာကိုပဲတွေ့ရပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ ကွမ်းစားရင် လမစေ့ဘဲ ကလေးမွေးတာ၊ မွေးလာတဲ့ ကလေးက ကိုယ်အလေးချိန်မပြည့်တာ၊ သားပျက် သားလျောဖြစ်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နို့တိုက်မိခင်တွေ ကွမ်းစားရင်လည်း မိခင်နို့ကို သောက်သုံးတဲ့ ကလေးမှာ ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်က ကျန်းမာပါတယ်။ ကွမ်းယာ တစ်နေ့တစ်ယာလောက်ပဲစားတယ်။ ဒါဆိုရင်ရော ကျွန်တော်က ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ပါမလား?
ဟုတ်ကဲ့။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကလည်း မတူသလို။ ကွမ်းဘယ်လောက်ထိ စားရင် အန္တရာယ်ကင်းတယ်။ စိတ်ချရတယ်။ စားလို့ရတယ်လို့ အတိအကျမပြောနိုင်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် တစ်နေ့ကို ကွမ်းတစ်ယာ စားလည်းပဲ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ကွမ်းယာစားရင် ပါးစပ်မှာ ဘယ်လိုမျိုး အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာမှာလဲ။ ဘယ်လောက်ကြာကြာစွဲစားရင် ရောဂါဖြစ်မှာလဲ။
ခံတွင်းနံရံတွေမှာ ပါးစောင်တွေမှာ အဖြူရောင်လိုင်းတွေဖြစ်လာမယ်။ ပါးစပ်နာတာ၊ တော်ရုံပူတဲ့ စပ်တဲ့ အစားအစာတွေကိုပဲ မစားနိုင်တာ၊ လျှာလေးအာလေးဖြစ်တာတွေဖြစ်လာမယ်။ ပါးစပ်မှာ အနာပေါက်တာ၊ သွားဖုံးရောင်တာ၊ ရေစီးကမ်းပြိုလိုက်တာ စတဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်လာမယ်။ သွားတွေ ယိုင်တာ နဲ့တာ၊ အနီရောင် အမဲရောင်တွေစွန်းတာတွေဖြစ်လာမယ်။ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပါးစပ် ဟ လို့မရတာ။ပါးစပ်ဖွင့်ရတာ အခက်အခဲဖြစ်တာတွေဖြစ်လာမယ်။ အဲ့ကနေတစ်ဆင့် နောက်ဆုံးကင်ဆာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကွမ်းယာကို ရေရှည်စားတဲ့သူတွေမှာဆိုရင် အချိန် ၈ နှစ်ကနေ ၁၁ နှစ်အတွင်းမှာ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကွမ်းယာစားသုံးခြင်းက ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးကိုသာဖြစ်စေတာကြောင့် ကွမ်းမစားတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
Ref; review of Areca nut and tobacco use in the pacific everything one needs to know about areca nutareview of the systemic adverse effects of Areca nut or betel nut
Credit : Daw Phyu Phyu Khin
ကှမျးယာစားသူမြား သတိထားစရာ အန်တရာယျ
ကှမျးစားတဲ့ အလအေ့ကငျြ့ဟာ ကြှနျမတို့ နိုငျငံမှာတငျမဟုတျပါဘူး။ အရှတေ့ောငျအာရှဒသေတျောတျောမြားမြားမှာတှရေ့ပါတယျ။ အမြားဆုံးကတော့ ထိုငျဝမျ၊ ပွီးရငျကြှနျမတို့ နိုငျငံပဲဖွဈပါတယျ။ ကှမျးစားခွငျးက ပတျဝနျးကငျြကို ညဈညမျးစရေုံတငျမကပါဘူး။ စားသုံးတဲ့သူကိုပါ အသကျအန်တရာယျဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
ကှမျးယာမှာ အဓိကအားဖွငျ့ ကှမျးရှကျ၊ ကှမျးသီး၊ ထုံးနဲ့ စားသုံးတဲ့သူပျေါလိုကျပွီး အခွားပစ်စညျးမြားပါဝငျပါတယျ။
အဓိကကတော့ ကှမျးသီးမှာ ပါဝငျတဲ့ အာရီကိုလိုငျး (arecoline)ပါ။ သူက ကငျဆာဖွဈစပေါတယျ။ ကငျဆာမဖွဈခငျမှာ ပါးစပျထဲမှာ အဖွူကှကျတှေ အနီကှကျလိုအနာတှဖွေဈတာ။ ပါးစောငျမှာ အနာဖွဈတာ ရောငျတာ ပေါကျပွဲတာတှဖွေဈတတျပါတယျ။ ဒါတှဟော ကငျဆာမဖွဈခငျ ရှပွေ့ေးလက်ခဏာတှပေါ။ အဲ့နောကျမှာ ပါးစောငျကငျဆာ၊ အသညျးကငျဆာလညျးဖွဈနိုငျပါသေးတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျတှမှောဆိုရငျ လမစဘေဲ့ ကလေးမီးဖှားတာထိဖွဈနိုငျပါတယျ။
ကှမျးယာမှာ ပါတဲ့ထုံးကွောငျ့ ကငျဆာပိုဖွဈနိုငျပါတယျ။ ပါးစပျထဲမှာ ဝါးနခြေိနျမှာလညျး ထုံးဓါတျကို အဆမတနျမွငျ့တကျစပွေီး ခံတှငျးထဲမှာ ရှိတဲ့ တဈရှူးတှကေိုပကျြစီးစပေါတယျ။ ကှမျးဝါးနခြေိနျအတှငျးမှာ ခံတှငျးထဲမှာရှိတဲ့ တံတှေးဟာ ပွငျးအား pH 10 အထိမွငျ့တကျလာပါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ အဝတျလြှျောဆပျပွာရညျတှတေောငျမှ pH9ဝနျးကငျြပဲရှိပါတယျ။ ကှမျးတံတှေးဟာ အဝတျလြှျောဆပျပွာရညျထကျတောငျမှ ပွငျးအားပိုမြားပါတယျ။
ကှမျးယာကို မြားမြားစားလေ။ အခြိနျကွာကွာ ဝါးလေ ကငျဆာဖွဈနိုငျဖို့ အခှငျ့အရေးပိုမြားလဖွေဈပါတယျ။
ရှေးခတျေတုနျးကတော့ ကှမျးယာစားရငျ အစာကွတေယျ။ ခံတှငျးနံ့ကငျးတယျဆိုပွီး ထမငျးစားပွီးရငျ စားကွပါတယျ။ ဟုတျပါတယျ။ ကှမျးသီးမှာပါဝငျတဲ့ ဓါတျတှကေ အစာလမျးကွောငျးမှာ ရှိတဲ့ ကွှကျသားတှကေို လှုံဆျောပေးတယျ။ တံတှေးပိုထှကျစတေယျ။ ဝမျးမှနျစပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး အစာအိမျအနာပိုဖွဈစနေိုငျတာကွောငျ့ ကှမျးယာစားခွငျးမှာ ကောငျးကြိုးထကျ ဆိုးကြိုးက ပိုမြားနတောကိုပဲတှရေ့ပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျတှေ ကှမျးစားရငျ လမစဘေဲ့ ကလေးမှေးတာ၊ မှေးလာတဲ့ ကလေးက ကိုယျအလေးခြိနျမပွညျ့တာ၊ သားပကျြ သားလြောဖွဈတာတှဖွေဈတတျပါတယျ။ နို့တိုကျမိခငျတှေ ကှမျးစားရငျလညျး မိခငျနို့ကို သောကျသုံးတဲ့ ကလေးမှာ ကနျြးမာရေးကိုထိခိုကျနိုငျပါတယျ။
ကြှနျတျောက ကနျြးမာပါတယျ။ ကှမျးယာ တဈနတေ့ဈယာလောကျပဲစားတယျ။ ဒါဆိုရငျရော ကြှနျတျောက ကငျဆာဖွဈနိုငျပါမလား?
ဟုတျကဲ့။ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ လူတဈယောကျနဲ့ တဈယောကျရဲ့ ကိုယျခံစှမျးအားကလညျး မတူသလို။ ကှမျးဘယျလောကျထိ စားရငျ အန်တရာယျကငျးတယျ။ စိတျခရြတယျ။ စားလို့ရတယျလို့ အတိအကမြပွောနိုငျပါဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ တဈနကေို့ ကှမျးတဈယာ စားလညျးပဲ ကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။
ကှမျးယာစားရငျ ပါးစပျမှာ ဘယျလိုမြိုး အပွောငျးအလဲတှေ ဖွဈလာမှာလဲ။ ဘယျလောကျကွာကွာစှဲစားရငျ ရောဂါဖွဈမှာလဲ။
ခံတှငျးနံရံတှမှော ပါးစောငျတှမှော အဖွူရောငျလိုငျးတှဖွေဈလာမယျ။ ပါးစပျနာတာ၊ တျောရုံပူတဲ့ စပျတဲ့ အစားအစာတှကေိုပဲ မစားနိုငျတာ၊ လြှာလေးအာလေးဖွဈတာတှဖွေဈလာမယျ။ ပါးစပျမှာ အနာပေါကျတာ၊ သှားဖုံးရောငျတာ၊ ရစေီးကမျးပွိုလိုကျတာ စတဲ့ လက်ခဏာတှဖွေဈလာမယျ။ သှားတှေ ယိုငျတာ နဲ့တာ၊ အနီရောငျ အမဲရောငျတှစှေနျးတာတှဖွေဈလာမယျ။ တဈဖွညျးဖွညျးနဲ့ ပါးစပျ ဟ လို့မရတာ။ပါးစပျဖှငျ့ရတာ အခကျအခဲဖွဈတာတှဖွေဈလာမယျ။ အဲ့ကနတေဈဆငျ့ နောကျဆုံးကငျဆာဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ကှမျးယာကို ရရှေညျစားတဲ့သူတှမှောဆိုရငျ အခြိနျ ၈ နှဈကနေ ၁၁ နှဈအတှငျးမှာ ကငျဆာဖွဈနိုငျပါတယျ။
ကှမျးယာစားသုံးခွငျးက ကောငျးကြိုးထကျ ဆိုးကြိုးကိုသာဖွဈစတောကွောငျ့ ကှမျးမစားတာက အကောငျးဆုံးဖွဈပါတယျ။